Ɛboa Ma Yɛkwati Ɔhaw—Aguamammɔ, Asanom Bebrebe, Anaasɛ Yɛde Yɛn Ho Bɛhyehyɛ Obi
Ɔwɛn-Aban | No. 1 2018
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Finnish Sign Language Fon French Ga Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
1 Ɛboa Ma Yɛkwati Ɔhaw
Bible ma yehu sɛ emu afotusɛm no fi Onyankopɔn hɔ, na “eye ma ɔkyerɛkyerɛ, ntɛnyi, nneɛma ateɛteɛ.” (2 Timoteo 3:16) Wohwɛ a ɛyɛ nokware? Ebinom de afotusɛm a ɛwɔ Bible mu no ayɛ adwuma, enti bere a wohyiaa ɔhaw akɛse wɔ asetenam no, wɔamma anhyɛ wɔn so, mmom no wɔkwatii. Yɛnhwɛ wɔn mu bi.
Delphine a yɛkaa ne ho asɛm no kaa sɛ, sɛ adwinnwen hyɛ ne so a, na ɛyɛ no sɛ ɔnnom nsa bebree. Bible nkasa ntia nsa kakra a obi bɛnom. Nanso ɛka sɛ: ‘Nkɔka sadweamfo ho.’ (Mmebusɛm 23:20) Nhwehwɛmu kyerɛ sɛ, wɔn a wɔnom nsa bebree no, etumi bɔ wɔn yare, ɛsɛe wɔne afoforo ntam, na afe biara wɔn mu ɔpepem pii wuwu mpofirim. Sɛ yɛde Bible mu afotusɛm yɛ adwuma a, yebetumi akwati saa ɔhaw yi mu dodow no ara.
Saa na Delphine yɛe. Seesei ɔka sɛ: “Mibehui sɛ ɛnyɛ nsa na ɛbɛboa me. Mede afotusɛm a ɛwɔ Filipifo 4:6, 7 no yɛɛ adwuma. Ɛka sɛ: ‘Munnnwinnwen biribiara nnhaw mo ho, na mmom momfa . . . mo adesrɛ nto Onyankopɔn anim.’ Anadwo biara a mɛte nka sɛ m’adwenem ayɛ bebree anaasɛ adwinnwen ahyɛ me so no, mekotow srɛ Yehowa. Meka me haw nyinaa kyerɛ no. Nea ama me bo afuw, nea enti a meredi yaw, anaa mabotow no, meka ne nyinaa kyerɛ no. Afei, mesrɛ no sɛ ɔmmoa me ma minhu nea ɛsɛ sɛ meyɛ na ama m’ani agye. Ade kye a, mehwɛ hu sɛ mayi dadwen no nyinaa afi me kɔn so ampa. Wei a meyɛe no boaa me ma mede m’adwene sii nea mewɔ so mmom sen sɛ mede besi nea minni so. Misii gyinae sɛ merennom nsa bio. Asomdwoe a minyae no, na ɛsom bo ma me paa, enti meyɛɛ m’adwene sɛ meremma emfi me nsa da.”
Yɛreka ɔhaw a etumi tew koma anaa ɛma awerɛhow hyɛ obi so paa a, ɔbrasɛe yɛ emu baako. Nanso Bible mu afotusɛm betumi aboa yɛn ma yɛahu nea ɛkɔfa saa ɔhaw yi ba na yɛakwati. Ebi ne sɛ wode wo ho bɛhyehyɛ obi anaa wobɛhwɛ ponografi. Aberante bi a ɔde Samuel kaa sɛ: “Na ɛnyɛ den koraa sɛ mede me ho bɛhyehyɛ mmea. Ɛtɔ da bi a, mitumi hu sɛ ɔbaa bi ani gye me ho, nanso na m’ani nnye ne ho. Ɛba saa a, ɛyɛ me dɛ sɛ mede me ho bɛhyehyɛ no.” Samuel behuu sɛ na wɔtaa bɔ no sobo sɛ ɔde ne ho hyehyɛ mmaa bere mpo a na ɔnyɛɛ n’adwene sɛ ɔbɛyɛ saa. Enti ɔyɛɛ n’adwene sɛ ɔbɛhyɛ da de ne ho ahyehyɛ mmaa. Nanso, na saa suban no haw no. Seesei ɔka sɛ: “Ná nea meyɛ no haw me paa. Efisɛ ɛma meyɛɛ pɛsɛmenkominya.”
Samuel kenkan asɛm bi a wɔde agu jw.org wɛbsaet so ama mmabun. Afei odwen asɛm a ɛwɔ Mmebusɛm 20:11 ho. Ɛka sɛ: “Abofra mpo, wɔde ne nneyɛe na ehu sɛ ne nnwuma ho tew na ɛteɛ.” Ɛboaa no sɛn? Samuel behuu sɛ mmaa a ɔde ne ho hyehyɛ wɔn no nyɛ suban a ɛho tew anaa ɛteɛ. Seesei ɔka sɛ: “Mibehui sɛ, sɛ obi yɛ ɔbabun na ɔde ne ho hyehyɛ obi a, ɛma onya subammɔne, na ɛno remma ɔnyɛ okunu anaa ɔyere pa. Misusuw ho sɛ, sɛ daakye meware na me yere hu sɛ mede me ho rehyehyɛ ɔbaa foforo a, sɛn na ɔbɛte nka? Ɛma mibehui sɛ saa suban no nye. Ɛwom, ɛnyɛ den sɛ wode wo ho bɛhyehyɛ obi de, nanso ɛno nkyerɛ sɛ ɛyɛ suban pa.” Samuel yɛɛ nsakrae. Ogyae sɛ ɔde ne ho bɛhyehyɛ mmaa, na ɛno aboa no ma wakwati ɔbrasɛe.
Ɔbrasɛe a Antonio de ne ho hyɛɛ mu mpo deɛ, ani soso paa. Ɔhwɛɛ ponografi ma ɛkaa ne hɔ. Ɛwom sɛ na waware ɔbaa a ɔdɔ no paa deɛ, nanso ɛreyɛ ara ni na wakɔhwɛ ponografi. Ɔkaa sɛ bere a odwinnwen 1 Petro 5:8 ho no, ɛboaa no paa. Ɛhɔ ka sɛ: “Mo ani nna hɔ, monwɛn. Mo tamfo Ɔbonsam nenam sɛ gyata a ɔbobom apɛ obi amene no.” Antonio kaa sɛ: Ponografi atwa yɛn ho ahyia wɔ wiase yi mu baabiara, na saa mfonini yi betumi aka w’adwene mu. Kyerɛwsɛm yi boaa me ma mihuu baabi a saa sɔhwɛ no fi. Enti sɛ m’ani bɔ mfonini a ɛtete saa so a, ɛsɛ sɛ mekae no ntɛm ara sɛ efi Ɔbonsam. Seesei mabehu sɛ ɛyɛ Yehowa nkutoo na obetumi aboa me ma ‘m’ani ada hɔ na mawɛn’ sɛnea ɛbɛyɛ a metumi ako atia saa sɔhwɛ ɛba m’adwene, me koma, ne m’aware mu no. Antonio nyaa mmoa a na ohia no, enti seesei watumi agyae saa subammɔne no. Wei aboa no ma wakwati ɔhaw akɛse mpo.
Enti yɛahu pefee sɛ, afotu a Bible de ma yɛn no, nyansa wom na ebetumi aboa yɛn ama yɛakwati ɔhaw akɛse. Na sɛ ɔhaw bi abɛtena yɛn so nso ɛ? Yɛnhwɛ sɛnea Onyankopɔn Asɛm betumi aboa yɛn ama yɛadi saa ɔhaw ahorow no ho dwuma.
Nyansa wɔ Bible afotusɛm mu, na ebetumi aboa yɛn ma yɛakwati ɔhaw ahorow bi
Ɛboa Ma Yɛkwati Ɔhaw
Afotu a Ɛwɔ Bible Mu No, Ɛso Wɔ Mfaso Nnɛ?
Bible Mu Nsɛm​—Mfaso Wɔ So Bere Nyinaa
Bible No—Atwam Anaa Ɛwɔ N’anim?
2 Ɛboa Ma Yedi Ɔhaw Ho Dwuma
3 Ɛboa Ma Yegyina Ɔhaw Ano
Bible No—Ɛfa Wo Daakye Ho Sɛn
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN No. 1 2018 | Bible No, Ɛso Da So Ara Wɔ Mfaso Nnɛ?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN No. 1 2018 | Bible No, Ɛso Da So Ara Wɔ Mfaso Nnɛ?
No. 1 2018 | Bible No, Ɛso Da So Ara Wɔ Mfaso Nnɛ?
ƆWƐN-ABAN No. 1 2018 | Bible No, Ɛso Da So Ara Wɔ Mfaso Nnɛ?